Miezaha ho Tony Foana ary Matokia An’i Jehovah | Gazety Fianarana
LAHATSORATRA FIANARANA 1
ANDININ-TENY HO AN’NY TAONA 2021: “Hatanjaka ianareo raha tony foana sy feno toky.”​—ISAIA 30:15. *
1. Inona no tsapan’i Davida Mpanjaka ka mety ho tsapantsika koa?
SAMY te hanana fiainana milamina daholo isika. Tsy mahafinaritra mihitsy izany mitebiteby izany. Indraindray anefa isika tototry ny adin-tsaina. Mety hahatsapa hoatran’i Davida Mpanjaka àry ny mpanompon’i Jehovah sasany, ka hiteny hoe: “Rera-tsaina aho, ary ngoly ny foko ato anatiko.”​—Sal. 143:4.
2. Inona no hodinihintsika ato amin’ity lahatsoratra ity?
2 Misy foana ny zavatra mampiady saina. Na izany aza, dia misy azontsika atao mba tsy hitebiteby be loatra. Fa inona ny zavatra sasany mety hahatonga antsika hiady saina? Inona no hanampy antsika mba ho tony foana rehefa miatrika olana? Handinika an’ireo isika ato.
INONA NO METY HAHATONGA ANTSIKA HIADY SAINA?
3. Inona ny olana mianjady amintsika? Misy azontsika atao ve mba hisakanana azy ireny?
3 Be dia be ny olana mety hampiady saina antsika. Indraindray anefa zara raha misy azontsika atao mba hamahana an’ilay izy, na isika tsy afa-manoatra. Miakatra foana, ohatra, ny vidin’ny sakafo sy akanjo ary hofan-trano isan-taona, dia tsy afaka manova an’izany isika. Matetika koa ny mpiara-miasa amintsika sy ny mpiara-mianatra amintsika no miezaka mitarika antsika hanao ratsy na haloto fitondran-tena, dia tsy afaka manakana an-dry zareo isika. Manginy fotsiny ny heloka bevava eny amin’ny tanàna misy antsika. Tsy misy azontsika atao amin’izany anefa. Fa maninona ny fiainantsika no feno an’ireo olana ireo? Satria tsy miraharaha ny fitsipiky ny Baiboly ny ankamaroan’ny olona. I Satana rahateo no andriamanitr’ity tontolo ity. Fantany hoe hisy olona tsy hanompo an’i Jehovah noho “ny fanahiana” eo amin’ny fiainana. (Mat. 13:22; 1 Jaona 5:19) Tsy mahagaga àry raha feno olana mampitebiteby maneran-tany.
4. Inona no mety hitranga rehefa manana olana isika?
4 Rehefa manana olana isika, dia mety tsy hahavita hieritreritra zavatra hafa ankoatra an’izay. Mety hanahy, ohatra, isika hoe: ‘Ahoana raha tsy ampy ny vola eo am-pelatanako? Ahoana raha marary aho dia tsy ho afaka hiasa na ho very asa mihitsy?’ Mety hanahy koa isika sao hivadika amin’Andriamanitra rehefa misy fakam-panahy. Kely sisa i Satana dia hampirisika ny olona feheziny mba hanafika antsika vahoakan’i Jehovah. Mety ho lasa saina àry isika hoe ahoana no hataontsika rehefa tonga izany. Diso ve isika raha miady saina amin’ireo?
5. Inona no tian’i Jesosy holazaina amin’ilay hoe: “Aza manahy intsony”?
5 Fantatsika fa nilaza tamin’ny mpanara-dia azy i Jesosy hoe: “Aza manahy intsony.” (Mat. 6:25) Midika ve izany fa tsy tokony hanahy mihitsy isika? Tsy izany ka! Na ny mpanompon’i Jehovah tsy nivadika taloha aza mantsy niady saina koa, nefa mbola nankasitrahan’i Jehovah ry zareo. * (1 Mpanj. 19:4; Sal. 6:3) Te hampahery antsika i Jesosy raha ny marina. Tsy tiany hanahy be momba ny fiainana mantsy isika, ka hanao an-tsirambina ny fanompoana an’i Jehovah. Inona àry no azontsika atao rehefa miady saina isika?—Jereo ilay hoe “ Inona no Azonao Atao Rehefa Miady Saina Ianao?”
INONA NO HANAMPY ANTSIKA HO TONY?
Fehintsoratra 6 *
6. Araka ny Filipianina 4:6, 7, inona no hampitony anao rehefa miady saina ianao?
6 1) Mivavaha matetika. Raha mivavaka amin’i Jehovah ianao rehefa miady saina, dia hahatsiaro ho maivamaivana. (1 Pet. 5:7) Hamaly ny vavaka ataonao izy dia hanome anao ny ‘fiadanany, izay lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra.’ (Vakio ny Filipianina 4:6, 7.) Hampiasa ny fanahiny mahery i Jehovah mba hampitony ny tebitebinao.​—Gal. 5:22.
7. Inona no tokony hotadidintsika rehefa mivavaka isika?
7 Rehefa mivavaka amin’i Jehovah ianao, dia aborahy aminy daholo izay ao am-ponao. Lazao aminy mazava tsara hoe inona ilay olana, dia ahoana ny fihetseham-ponao vokatr’izany. Raha mieritreritra ianao hoe mety hisy vahaolana, dia mangataha fahendrena aminy mba hahitanao an’izany. Mangataha koa hery mba hahavitanao hanao zavatra mifanaraka amin’izany. Raha hitanao indray hoe tsy misy azo atao, dia iangavio izy hanampy anao tsy hiady saina be loatra. Rehefa hazavainao mazava tsara amin’i Jehovah ny olana mahazo anao, dia ho mora kokoa aminao ny hahita hoe ahoana no namaliany an’ilay vavaka. Aza kivy anefa fa mivavaha foana raha hoatran’ny hoe tsy mivaly eo no ho eo ny vavaka nataonao. Tsy vavaka voafaritra tsara fotsiny mantsy no tian’i Jehovah hataonao, fa tiany hikiry hangataka aminy koa ianao.​—Lioka 11:8-10.
8. Inona koa no tokony horesahinao amin’ny vavaka?
8 Rehefa mivavaka momba ny olana mahazo anao koa ianao, dia aza hadinoina ny misaotra an’i Jehovah. Mahasoa antsika mantsy ny mitadidy ny zavatra tsara efa nataony ho antsika, na dia mafy aza ny manjo antsika. Ahoana anefa rehefa tsy hainao indraindray ny milaza ny fihetseham-ponao? Tadidio fa na vavaka tsotra kely aza dia valian’i Jehovah. Na miteny fotsiny aza ianao hoe: ‘Jehovah ô, vonjeo!’, dia hamaly izy.​—2 Tan. 18:31; Rom. 8:26.
Fehintsoratra 9 *
9. Inona no tokony hataontsika rehefa matahotra?
9 2) Matokia an’i Jehovah dia araho izay lazainy, fa aza miantehitra amin’ny fahendrenao. Natahotra ny hotafihin’ny Asyrianina ny mponin’i Joda, tamin’ny andron’i Isaia mpaminany. Nitady hevitra mafy àry ry zareo mba tsy hofehezin’ny Asyrianina. Izany no nahatonga an-dry zareo hangataka fanampiana tamin’i Ejipta, nefa ny Ejipsianina mpanompo sampy. (Isaia 30:1, 2) Nampitandrina an-dry zareo àry i Jehovah fa loza no ho vokatr’izany fanapahan-kevitra izany. (Isaia 30:7, 12, 13) Naniraka an’i Isaia mpaminany izy mba hilaza amin’ny vahoaka hoe inona no azon-dry zareo atao raha tena te ho voaro. Izao no nolazainy: ‘Hatanjaka ianareo raha tony foana sy matoky’ an’i Jehovah.—Isaia 30:15b.
10. Rahoviana, ohatra, isika no afaka mampiseho hoe matoky an’i Jehovah?
10 Ahoana no hampisehoantsika hoe matoky an’i Jehovah isika? Andao hijery ohatra vitsivitsy. Ahoana raha misy manome anao asa tsara karama kokoa, nefa ilay izy haka fotoana be sady hanelingelina ny fanompoanao an’i Jehovah? Ahoana indray raha misy olona manadaladala anao any am-piasana, nefa izy tsy mpanompon’i Jehovah vita batisa? Ary ahoana raha misy fianakavianao akaiky mandrahona anao hoe: “Izay iray tianao: Izaho sa Jehovah”? Sarotsarotra aloha ny manapa-kevitra rehefa sendra an’ireo e! Na izany aza, dia tadidio fa hanoro anao an’izay tokony hatao i Jehovah isaky ny mila manapa-kevitra hoatr’izany ianao. (Mat. 6:33; 10:37; 1 Kor. 7:39) Hatoky azy ve anefa ianao, dia hanaraka an’izay lazainy?
Fehintsoratra 11 *
11. Ny tantaran’iza no hanampy anao ho tony rehefa misy fanenjehana?
11 3) Mianara avy amin’izay nataon’ny olona voaresaka ao amin’ny Baiboly. Misy tantara be dia be ao amin’ny Baiboly mampiseho fa tena ilaina ny miezaka ho tony sy hatoky an’i Jehovah. Rehefa mianatra an’ireny ianao, dia eritrereto hoe inona no nanampy ny mpanompon’Andriamanitra mba ho tony foana na dia nenjehina mafy aza. Tsy nihontsina, ohatra, ny apostoly na dia noraran’ny Fitsarana Avo Jiosy mba tsy hitory intsony aza. Sahy nilaza kosa ry zareo hoe: “Andriamanitra no mpitondra anay ka izy no tsy maintsy ankatoavinay, fa tsy olona.” (Asa. 5:29) Tsy natahotra mihitsy ry zareo na dia rehefa avy nokapohina aza. Fa maninona? Satria fantany hoe nanampy azy i Jehovah, ary tena faly tamin-dry zareo izy. Izany no nahatonga an-dry zareo hitory ny vaovao tsara foana. (Asa. 5:40-42) Hoatr’izany koa tamin’i Stefana hovonoina ho faty. Tony be izy dia hoatran’ny “tarehin’anjely ny tarehiny.” (Asa. 6:12-15) Resy lahatra mantsy izy hoe faly taminy i Jehovah.
12. Araka ny 1 Petera 3:14 sy ny 4:14, nahoana isika no afaka ny ho sambatra na dia rehefa enjehina aza?
12 Nanana porofo mivaingana ny apostoly hoe nanampy an-dry zareo i Jehovah. Nahavita fahagagana mantsy ry zareo. (Asa. 5:12-16; 6:8) Marina fa tsy mahavita fahagagana isika. Tena tia antsika anefa i Jehovah. Manome toky antsika izy ao amin’ny Teniny hoe afaka ny ho faly isika rehefa enjehina noho ny fahamarinana, satria ankasitrahany ary omeny fanahy masina. (Vakio ny 1 Petera 3:14; 4:14.) Tsy tokony hiasa saina be àry isika hoe ahoana no hataontsika rehefa tonga ny fanenjehana. Tokony hiezaka mafy kosa isika mba hatoky kokoa fa tena afaka manampy sy mamonjy antsika i Jehovah. Nampanantena i Jesosy hoe: “Izaho hanome anareo vava sy fahendrena izay tsy hain’ny fahavalo rehetra resena na toherina.” Natoky an’izany ny Kristianina tamin’ny taonjato voalohany, dia mila matoky an’izany koa isika. Tsy izay ihany fa nanome toky antsika i Jesosy hoe: “Raha miaritra ianareo dia ho voavonjinareo ny ainareo.” (Lioka 21:12-19) Aza hadinoina mihitsy koa fa tadidin’i Jehovah ny tsipiriany kely indrindra momba ny mpanompony tsy mivadika. Raha sanatria maty izy amin’izay dia hatsangany.
13. Nahoana isika no mila mandinika ny tantaran’ireo olona tsy tony sy tsy natoky an’i Jehovah?
13 Tsy tony sady tsy natoky an’i Jehovah ny olona sasany resahina ao amin’ny Baiboly. Tsy hamerina ny fahadisoan-dry zareo isika, raha mianatra avy amin’izay nataony. Eritrereto, ohatra, i Asa mpanjakan’ny Joda. Niantehitra tamin’i Jehovah izy rehefa nisy miaramila etiopianina be dia be nanafika an-dry zareo. Notahin’i Jehovah izy vokatr’izany ka nandresy. (2 Tan. 14:9-12) Ahoana anefa no nataony tatỳ aoriana rehefa nanafika an-dry zareo i Basa mpanjakan’ny Israely? Kely kokoa ny tafik’i Basa raha oharina amin’ny fahavalo nanafika an’i Joda teo aloha. Tsy niantehitra tamin’i Jehovah hoatran’ny teo aloha anefa i Asa, fa naleony nanakarama ny Syrianina mba hanampy azy. (2 Tan. 16:1-3) Narary be izy tatỳ aoriana rehefa ho faty, nefa mbola tsy niantehitra tamin’i Jehovah ihany.​—2 Tan. 16:12.
14. Inona no ianarantsika avy amin’ny fahadisoan’i Asa Mpanjaka?
14 Niantehitra tamin’ny Andriamaniny i Asa tamin’ny voalohany, rehefa niatrika olana. Tsy nanao an’izany intsony anefa izy tatỳ aoriana fa naleony niady irery. Hoatran’ny nahomby ilay hevitr’i Asa hoe niantehitra tamin’ny Syrianina. Tsy naharitra anefa izany. Naniraka mpaminany i Jehovah mba hilaza aminy hoe: “Noho ianao niantehitra tamin’ny mpanjakan’i Syria, fa tsy tamin’i Jehovah Andriamanitrao, dia ho afa-mandositra tsy ho azon’ny tananao ny tafiky ny mpanjakan’i Syria.” (2 Tan. 16:7) Mila mitandrina àry isika sao matoky tena loatra, ka mieritreritra hoe isika ihany dia hahavita hamaha ny olana mahazo antsika fa tsy mila ny fanampian’i Jehovah sy ny tari-dalana ao amin’ny Teniny. Na dia mila mandray fanapahan-kevitra maika be aza isika, dia tokony ho tony sy hiantehitra amin’i Jehovah. Hampiany isika amin’izay mba hanapa-kevitra tsara.
Fehintsoratra 15 *
15. Inona no azontsika atao rehefa mamaky Baiboly?
15 4) Miezaha hitadidy andinin-teny. Rehefa misy andinin-teny mampiseho hoe hahazo hery ianao raha tony sy matoky an’i Jehovah, dia tadidio ireny. Azonao vakina mafy izy ireny na soratana, dia jerena matetitetika. Nasaina namaky sy nisaintsaina tsy tapaka ny boky misy ny Lalàna, ohatra, i Josoa. Amin’izay izy hanao zavatra amim-pahendrena. Hanampy azy koa ny zavatra vakiny mba tsy hatahotra fa hanana herim-po rehefa mitarika ny vahoakan’Andriamanitra izy. (Jos. 1:8, 9) Afaka ny ho tony isika na dia misy olana mety hampitebiteby na hampahatahotra aza, satria misy andinin-teny be dia be afaka manampy antsika ao amin’ny Baiboly.​—Sal. 27:1-3; Ohab. 3:25, 26.
Fehintsoratra 16 *
16. Ahoana no ampiasan’i Jehovah ny fiangonana mba hanampiana antsika ho tony sy hatoky azy?
16 5) Miaraha amin’ny vahoakan’i Jehovah. Mampiasa an’ireo rahalahy sy anabavy i Jehovah mba hanampiana antsika ho tony sy hatoky azy. Rehefa any am-pivoriana, ohatra, isika dia mandray soa avy amin’ny lahateny sy ny valin-teny ary ny resadresaka mampahery amin’ny mpiara-manompo. (Heb. 10:24, 25) Tsara koa ny mitantara an’izay mampanahy antsika amin’ny namantsika akaiky ao amin’ny fiangonana. Tena hampahery antsika mantsy izany. Hanampy antsika tsy hiady saina be “ny teny soa” lazain’ny namantsika.​—Ohab. 12:25.
Fehintsoratra 17 *
17. Nahoana no manampy antsika ho tony ny fanantenantsika, araka ny Hebreo 6:19?
17 6) Aza avela ho lefy mihitsy ny fanantenanao. Hoatran’ny ‘vatofantsika’ ny fanantenantsika an’ilay Fanjakana, ka manampy antsika ho tony rehefa ao anatin’ny mafy na rehefa mitebiteby. (Vakio ny Hebreo 6:19.) Saintsaino àry ny zavatra tsara ampanantenain’i Jehovah hoe hataony amin’ny hoavy. (Isaia 65:17) Tsy hisy hampiady saina anao intsony amin’izany. Eritrereto hoe ao amin’ny tontolo vaovao ianao, dia milamina be ny fiainana ary tsy misy zava-dratsy mitranga intsony. (Mika 4:4) Resaho amin’ny olon-kafa koa ny fanantenanao, amin’izay ianao hatoky kokoa hoe hitranga izany. Ataovy àry izay rehetra azonao atao mba hitoriana sy hanaovana mpianatra. Raha manao an’izany ianao, dia ho ‘azonao antoka tanteraka hatramin’ny farany ilay fanantenanao.’—Heb. 6:11.
“Hatanjaka ianareo raha tony foana sy feno toky.”—ISAIA 30:15
INONA NO AZONAO ATAO REHEFA MIADY SAINA IANAO?
1. Mivavaha matetika
2. Matokia an’i Jehovah dia araho izay lazainy
3. Mianara avy amin’izay nataon’ny olona taloha
4. Miezaha hitadidy andinin-teny
5. Miaraha amin’ny vahoakan’i Jehovah
6. Aza avela ho lefy mihitsy ny fanantenanao
18. Inona no ampoizintsika hoe hitranga amin’ny hoavy, ary inona no hanampy antsika hiatrika an’izany?
18 Efa akaiky hifarana ity tontolo ity, ka azo antoka hoe hihabetsaka ny olana hampiady saina antsika. Manampy antsika hiatrika an’ireny sy ho tony foana ny andinin-teny ho an’ny taona 2021. Mampahatsiahy antsika koa izy io hoe noho isika matoky an’i Jehovah no hahavitantsika an’izany, fa tsy noho ny herintsika. Matoky an’ilay fampanantenan’i Jehovah isika hoe: “Hatanjaka ianareo raha tony foana sy feno toky.” (Isaia 30:15) Andao àry hampiseho an’izany amin’ny zavatra ataontsika mandritra an’ity taona 2021 ity!
Tsy mety ve ny miady saina? Hazavao.
Inona avy ireo zavatra enina hanampy antsika ho tony foana?
Nahoana no mety tsara ny andinin-teny ho an’ny taona 2021?
HIRA 8 Jehovah no Fialofantsika
^ feh. 3 Avy amin’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao nohavaozina (anglisy) io andinin-teny io.
^ feh. 5 Miatrika zava-tsarotra isika amin’izao sy amin’ny hoavy, ka tena mila matoky an’i Jehovah. Manasongadina an’izany ny andinin-teny ho an’ny taona 2021. Hiresaka soso-kevitra azontsika ampiharana an’izany isika ato.
^ feh. 5 Tena mijaly ny rahalahy sy anabavy sasany tsy mivadika satria mitebiteby be na matahotra loatra, ary efa aretina mihitsy ilay izy. Tsy izany anefa ilay fanahiana tian’i Jesosy horesahina.
^ feh. 64 SARY: 1) Mivavaka mafy amin’i Jehovah momba an’izay mampiady saina azy ny anabavy iray mandritra ny andro.
^ feh. 66 SARY: 2) Mitady hevitra azo ampiharina ao amin’ny Tenin’Andriamanitra izy, mandritra ny fiatoana any am-piasana.
^ feh. 68 SARY: 3) Misaintsaina momba ny ohatra tsara sy ny ohatra ratsy voaresaka ao amin’ny Baiboly izy.
^ feh. 70 SARY: 4) Mametraka andinin-teny amin’ny toerana talaky maso izy, satria tiany hotadidina izy io.
^ feh. 72 SARY: 5) Falifaly erỳ izy manompo miaraka amin’ny namany.
^ feh. 74 SARY: 6) Misaintsaina momba ny hoavy izy, dia vao mainka matoky ny zavatra antenainy.
Hizara Hizara Miezaha ho Tony Foana ary Matokia An’i Jehovah
w21 Janoary p. 2-7